Y Llofft @ Llanrhidian, Gower - I-Airbnb
Uvimba sinombuki zindwendwe onguJo
I-Y Llofft ikwidolophana entle yaseLlanrhidian. I-Ylofft yindawo esemahlathini, i-Y Llofft sisakhiwo esinebhedi eyi-1 kunye neendawo ezintle eziselunxwemeni. Yonwabela ukuhambahamba kwiNdlela Yonxweme, kwiimayile zamaphandle amancinci. Kunye nokuhambahamba okanye ukonwabela ukubuka iindawo, yindawo entle yokutyelela iilwandle, ukuhamba ngebhayisekile, ukuqubha, ukusefa kunye nokuya kwimitshato. Yindawo apho ungaya khona kuyo uze wonwabele le ndawo intle yaseWales.
Ndiye ndahlala eWoodlands House iminyaka engaphezu kwe-15 kwaye iY Llofft isandul 'ukuguqulwa ukusuka kwigaraji endala/uvimba apho abanikazi bangaphambili basebenzisa isakhiwo njengegaraji/igumbi lokugcina izinto kwaye njengendawo elungiselelwe umsebenzi wamaplanga kunye nokwenza iifestile zeglasi ezinamabala. Uza kubona iglasi yokuqala enamabala esiyifake kwizakhiwo ezingaphandle.
I-Y Llofft yindawo ekhanyayo, eqaqambileyo yale mihla, kunye neendawo ezininzi zokuhlala kumgangatho ophezulu kwindawo ‘yophahla‘. Oku kuthetha ukuba kukho ukuphakama okulinganiselweyo kweentloko kwiindawo ezithile-kodwa oku akuphazamisi nantoni na ekwenza uzive unamagumbi aliqela e-Y Llofft. Igumbi elimanzi elisezantsi linethayile ngamatye endalo, njengakwindlu yangasese yesibini phezulu. Phezulu ekhitshini kuquka ioveni yombane/i-grill, ibhotile yombane, ifriji ebalulekileyo enefriji, umatshini wokuhlamba izitya ne-microwave, kunye neembiza, iipani, i-crockery kunye neeglasi. Igumbi lokuhlala elivulekileyo linesofa enkulu, itafile yekofu, itafile nezitulo ibe livulela ibhalkhoni ekwaziyo ukubona iindawo ezininzi. Kwelinye icala ungabona iWest Wales kunye nenye iBrecon Beacons! Ikwaqulethe i-wifi, i-Echo dot kunye ne-smart TV. Igumbi lokulala linebhedi enkulu ibe libonakala kakuhle xa ukwifestile ye-velux phezu kwendawo esegadini naselunxwemeni olungaphaya. Iindwendwe ziza kunikwa amashiti neetawuli zokuhlamba ezisandul 'ukuhlanjwa. Nceda uphathe iitawuli zakho zaselwandle ukuba ziyafuneka.
Ngenxa ye-coronavirus, nceda uqiniseke ukuba silandela ngokucokisekileyo izikhokelo zikaRhulumente kwaye silandela ngokucokisekileyo iinkqubo zokucoca kwangaphambili ngokuqwalasela ngakumbi iindawo 'ezibanjwa kakhulu ngezandla' ezinjengezi; imiqheba yamacango, iindawo zokulayita izibane, iitepu kunye nomphezulu womsebenzi njl njl.
Ngokuqhelekileyo ndiza kuquka iti, ikofu, iswekile, ityuwa nepepile, isonka esincinci, isonka esincinci, ipint yobisi nesidlo sebhotela. Ngelishwa, ngenxa yokuqhambuka kweCOVID-19 le nto ayizukufumaneka de kuphinde kwaziswe. Ukuba ufuna nayiphi na kwezi zinto ngexesha lokuhlala kwakho kuza kufuneka uze nazo. Njengesenzo esincinci sokuhlala kwakho apha siza kukushiyela ibhotile yewayini ukuze uyonwabele.
I-Y Llofft ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwi-Home Country Pub, enokutya okumuncis 'iintupha. Kukho iindawo ezininzi ezintle zokutya zasekuhlaleni – iBritannia, iLlanmadoc - iimayile eziyi-4,
I-King Arthur – iimayile eziyi-4,
I-Kings Head, i-Llangennith – iimayile eziyi-5.
Ibhari yeentlanzi zaseRoma - iPenclawdd - iimayile eziyi-4
I-GG 's kwi-Estuary (i-Ice cream parlour) Penclawdd - iimayile eziyi-4
Nceda ucetyiswe ukuba ungatshayi.
Izinja eziziphathe kakuhle ngokudibana kuphela.
Ndihlala kufutshane ne-Y Llofft ngoko ukuba kukho into oyifunayo nceda ubuze. Ndiza kwamkela ku-Y Llofft - enoba kukufika kwakho okanye kungekudala emva kokuba ufikile, kwaye kunjalo - ngaphandle kokuba ufuna uncedo, icebiso okanye incoko nje!!
Ndihlala kufutshane ne-Y Llofft ngoko ukuba kukho into oyifunayo nceda ubuze. Ndiza kwamkela ku-Y Llofft - enoba kukufika kwakho okanye kungekudala emva kokuba ufikile, kwaye kun…